Degso Tactical Battle Simulator APK loogu talagalay Android
Degso Tactical Battle Simulator
Degso Tactical Battle Simulator,
Tactical Battle Simulator, oo loo qaabeeyey si ka duwan ciyaaraha caadiga ah ee dagaalka, ayaa soo jiita dareenka sida ciyaar jilitaan oo gaar ah. Dagaal goos goos ah oo lagu qorsheeyey xeelado xeeladeed ayaa ku sugaya.
Ciyaartan, oo ay ku jiraan 80 unug oo kala duwan guud ahaan, waxaad ku bilaabi kartaa dagaalka adoo dooranaya ciidanka aad rabto. Qayb kasta waxay leedahay sifooyin u gaar ah iyo daciifnimo. Waa inaad doorataa ciidan sax ah si aad ugu guuleysato guulo waaweyn oo leh dagaalo hal abuur leh. Waad ku mahadsan tahay dahabka aad kasbato, waxaa suurtagal ah in la furo cutubyo cusub. Waxaad sidoo kale kor u qaadi kartaa askartaada iyo aaladaha dagaalka ee dahabka.
Ka sokow qoryaha, seefaha, fallaadhaha, taangiyada iyo aaladaha kala duwan, dawacooyinka ayaa sidoo kale ku jira ciyaarta. Markaad sare u kacdo, waxaad isticmaali kartaa dhammaan hubkan intaad la dagaallameyso dagaallo aad u adag. Waad ku mahadsan tahay muujinta qaababka badan, waxaad la yeelan kartaa dagaalo wadaag ah saaxiibbadaada. Ku guuleysiga dagaalladaas, waxaa suurtogal ah in la helo dahab si aad u iibsato cutubyo iyo qalab cusub.
Tactical Battle Simulator, oo si habsami leh ugu shaqeeya aaladaha Android iyo iOS oo laguugu soo bandhigo bilaash, waa ciyaar jilitaan dagaal aad u weyn oo ay doorbideen in ka badan 1 milyan oo isticmaale.
Tactical Battle Simulator Noocyada
Horumar: Moustache Banana